China Mwoyo Foil Container HT70 fekitari uye vagadziri | Jiahua
Mwoyo Foil Mudziyo HT70
Item No. No.HHH70
Maitiro: Moyo Mudziyo
Kurongedza: 20000pcs / Carton
Ctn Saizi: 615x315x615mm
isu tine mhando dzekapu keke pani, matunhu akasiyana ane akasiyana mashandiro tsika, saka isu tinogona maererano nevatengi 'zvinodiwa, kuvhura anoumba.
Allwin Pack inoshandisa mbishi zvinhu zvese zvinoenderana nemamiriro epasi rose ezvemamiriro ekunze, ese ndiwo giredhi rechikafu.Takavaka kudyidzana kwenguva yakareba nevatengi vanobva kuNorth America, Europe, Japan, Australia, Asia pamwe nendege, supamaketi, chikafu uye chikafu vagadziri.
Chigadzirwa Mufananidzo Chinhu It. HT70
Kurongedza 20000pcs / Carton
Kukura kweCtn 615x315x615mm
Yakanyanya diki & yakanaka moyo foil mudziyo ine yakasarudzika moyo chimiro yakagadzirirwa, yakanakira kwemazuva akakosha uye mapato
Yakanakisa kupisa conduction. Chiedza chakareruka asi chakasimba, chakasimba zvakakwana pakubika zvinodiwa
Dhizaini inoraswa, ingo rasa mapani aya uye hapana chikonzero chekushushikana nezve kukwesha nekuchenesa
Yakanakira zvinhu zvidiki zvakabikwa sepudding, jelly, kapu uye ese marudzi emunhu anoshumira
Nei Aluminium Foil?
1.Net saver yezve zviwanikwa.
Aluminium foil mune zvekudya uye zvinwiwa kurongedza zvinoshandiswa zvinochengetedza zviwanikwa zvakawanda kupfuura zvinodiwa mukugadzirwa kwayo. Akasiyana Hupenyu Hwenyoro Kuongorora (LCAs) anoratidza kuti alufoil kurongedza uye imba foil inopa zvishoma pasi pegumi muzana yezvakakanganisa kukanganisa mune yechigadzirwa hupenyu hwehupenyu - Sustainable kugadzirwa uye kushandiswa.
2. Dziviriro yezvipingamupinyi
Aluminium foil yakazara chipingaidzo kune mwenje, magasi uye hunyoro ndicho chikonzero chikuru chekushandisa kwayo mune anochinjika laminates echikafu, chokunwa uye tekinoroji kunyorera. Kunyangwe kana yakatetepa inopa dziviriro yakakwana uye kuchengetedza hwema uye hunhu hwechigadzirwa. Inogona kubatsira kuwedzera hupenyu hunobatika hwezvinhu zvakaomarara kwemwedzi yakawanda, kunyangwe makore, ichinyatso chengetedza hwema hwepakutanga. Nekugonesa zvigadzirwa kuti zvichengetedzwe kwenguva refu pasina kudikanwa kwefriji, Aluminium foil kurongedza kunobatsira kudzivirira kuparara uye kunogona kupa yakakura simba kuchengetedza.
Kusimudzira aruminiyamu pepa kurongedza sechinangwa, kuitira kudzikisira kusvibiswa kwezvakatipoteredza, kuvaka budiriro, kabhoni yakadzika uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwenzvimbo yekupona sevhisheni.
1) Imwe nzira kune zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoderedza kusvibiswa chena;
2.Kuderedza mugove wepepa-rakavakirwa kurongedza mumidziyo inoraswa yevatengi kunobatsira kudzora kutemwa kwemiti uye kusvibiswa kwemvura zviwanikwa muindasitiri yemapepa;
3.Kubatanidza aruminiyamu foil kurongedza marongedzero enharaunda zviwanikwa, kuzadzikiswa kwekusingaperi kwekupararira kwealuminium zviwanikwa uye mugwagwa kune kusimudzira kusimudzira kwenyika. Iri ibasa reboka redu, zvakare sekuzvipira.
Pashure: Mwoyo Foil Mudziyo HT02
Zvadaro: Mwoyo Foil Mudziyo HT100
Aluminum angazvidzvisa Containers With Lids
Aluminum angazvidzvisa Disposable Food Containers
Aluminium Foil Chikafu Midziyo
Aluminum angazvidzvisa Tora Out Containers
Mwoyo Foil Mudziyo HT100
Mwoyo Foil Mudziyo HT02
Mwoyo Foil Mudziyo HT520